Rafitra fampianarana any RDC, Repoblika Demokratikan'i Congo
Enga anie 14, 2022 Demi DR Kongo, am-pianarana
Any amin'ny Repoblika Demaokratikan'i Congo, ny fanabeazana fototra dia mety haharitra hatramin'ny enin-taona. Ny sekoly ambaratonga faharoa dia mety haharitra enin-taona vao vita. Ny mpianatra rehetra dia mila mamita fanadinam-pirenena amin'ny fiafaran'ny sekoly ambaratonga faharoa. ny
Ahoana no fiasan'ny sekoly any Aostralia?
Enga anie 7, 2022 Demi Aostralia, am-pianarana
Ny fianarana any Aostralia dia fomba lehibe hanohizana ny fianaranao sy ny asanao. Ny Sekoly sy ny rafi-pampianarana any Aostralia dia manolotra safidy fianarana isan-karazany. Ny mpianatra iraisam-pirenena dia afaka mangataka fampianarana any Aostralia ihany koa. Ny fianarana any Aostralia dia
Ny rafi-pampianarana any Afghanistan. Lisitry ny sekoly iraisam-pirenena ao Kabul
Janoary 10, 2022 Demi Afghanistan, am-pianarana
Raha mikasa ny hifindra any Afghanistan miaraka amin'ny fianakavianao ianao dia tsy maintsy manamarina ny rafi-pampianarana ao Afghanistan. Ato amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny rafi-pampianarana sy fampianarana any Afghanistan isika. Afghanistan dia anisan'ireo firenena manana ny
Rafitra sekoly any Italia
Janoary 7, 2022 Demi Italia, am-pianarana
Mifindra any Italia miaraka amin'ny fianakaviana fa tsy maintsy te hahalala ny rafi-pianarana any Italia ianao. Ny Sekolim-panjakana Italiana dia maimaim-poana ho an'ny ankizy rehetra monina any Italia. Any Italia, misy rafitra sekolim-panjakana, antsoina koa hoe
Ahoana ny rafi-pampianarana any Malezia?
Janoary 7, 2022 Demi Malezia, am-pianarana
Sekoly sy rafi-pampianarana any Espaina
Janoary 7, 2022 Demi am-pianarana, Espaina
Ny Sekoly sy ny rafi-panabeazana any Espaina dia nihatsara be tato anatin'ny 25 taona farany tamin'ny alàlan'ny fampitomboana ny fandaniana sy ny fanavaozana ara-panabeazana. Ny fanadihadiana farany nataon'ny PISA momba ny fenitry ny fanabeazana ho an'ny ankizy 15 taona manerana ny firenena sy toekarena maro dia nampiseho fa ny zava-bitan'i Espaina
Ny rafi-pampianarana UAE. Sekoly any Emirà Arabo Mitambatra
Janoary 4, 2022 Demi am-pianarana, Emira Arabo Mitambatra
Ny Rafitra Fanabeazana ao Emirà Arabo Mitambatra dia nanery ny fampianarana ho an'ny ankizy Emiratis dimy taona no ho miakatra, anisan'izany ny mpifindra monina. Ny fanabeazana fototra sy ny fampianarana ambaratonga faharoa amin'ny andrim-panjakana dia omena maimaim-poana ho an'ny firenena UAE rehetra hatramin'ny 18 taona.